Properties List | Myanmar Realestate Portal
54 2,400 ft2
This is demo listing Total ...
This is demo listing Total Views: 115 ...
6,500 Lakh Negotiable
ဘိုးဘွားပိုင်မြေ မစိုးရိမ်လမ်းသွယ်၃ ခြံအမှတ် ၅၀၈ ထောင့်ကွက် မိုးဆေးခန်းဘေးလမ်း ၁၀ မိုင် ၆၀*၈၀ Total Views: 40 ...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန်၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံဆောက်လုပ်ရန်၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန် အထူးသင့်လျှော်သော လှည်းကူးမြို့နယ် မလေးရှားပိတောက်အပင်(၄၀၀၀)၂နှစ်သား၊ ကျွန်းအပင်(၁၅၀၀)၂နှစ်သား၊ ရန်ကုန်-နေပြည်တော်အမြန်လမ်းနှင့်နီး၊ Total Views: 158 ...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန်၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံဆောက်လုပ်ရန်၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် အထူးသင့်လျှော်သည်။ သီးပင်စားပင်မျိုးစုံ စိုက်ပျိုးထား၊ လမ်းမဘေး၊ ဈေးနှင့်နီး၊ ကားဂိတ်နှင့်နီး၊ Total Views: 169 ...
32 1,069 ft2
​ရွှေဗဟိုအထူးကု​ဆေးရုံနှင့်​Orange Supermarket အနီး မလွှကုန်းဘူးတာအနီး ၊ ...
​ရွှေဗဟိုအထူးကု​ဆေးရုံနှင့်​Orange Supermarket အနီး မလွှကုန်းဘူးတာအနီး ၊ အာ​သောက​ဈေးအနီး။ Total Views: 135 ...
2,000 Lakh ညှိနှိုင်း
​ Total Views: 151 ...
1,700 Lakh ညှိနှိုင်း
သံလျင် စတားစီးတီး ၄လွှာ Total Views: ...
သံလျင် စတားစီးတီး ၄လွှာ Total Views: 191 ...
Master Bedroom 1,Singal Bedroom 2,Kitching ...
Master Bedroom 1,Singal Bedroom 2,Kitching Room,Living Room,Bathroom2,Toilet2Total Views: 133 ...
1,400 Lakh ညှိနှိုင်း
တိုက်ခန်းရောင်းမည် ရန်ကင်း ရန်ငြိမ်းအိမ်ယာ ၆ လွှာ
ရန်ကင်း ၅ ရပ်ကွက် ရန်ငြိမ်းအိမ်ယာ တိုက်၉/၂ ...
ရန်ကင်း ၅ ရပ်ကွက် ရန်ငြိမ်းအိမ်ယာ တိုက်၉/၂ အခန်း၅၁ ခြောက်လွှာ အနောက်ရန်ကင်းဈေးအနီး ကိုရီးယားကြမ်းခင်း အေးကွန်း၃ လုံး ရေပူစက်၁လုံး ဘိုထိုင်၂လုံး အိပ်ခန်း၃ခန်း Total Views: 56 ...
1,200 Lakh 1200 ညှိနှိုင်း
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန်၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန် ဆီဆိုင်ဖွင့်ရန် အထူးသင့်လျှော်သည် Total Views: 216 ...
This is demo posting Total ...
This is demo posting Total Views: 56 ...
This is demo posting Total Views: 151 ...